के शिक्षक सबै शैक्षिक क्षेत्रको कमजोरी बोक्ने भरिया हो ? | EduKhabar
तालुकदार निकाय र शिक्षाविद्का सुझाव
शिक्षकलाई दिइने सुझावको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समय अनुरुप अपडेट हुनु पर्छ भन्ने नै हो । विद्यार्थीको रुची अनुसार सिकाउने हो पढाउने हैन । विश्वमा सजिलै विक्ने जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मा शिक्षकले लिनु पर्ने सुझाव यी निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त हुन्छ ।
पक्कै पनि यी सुझावमा विमती राख्नु पर्ने कुने कारण छैन । तर, त्यसलाई व्यवहारिकताको कसीमा उपयुक्त र अनुपयुक्त छुट्याउन भने विर्सनु हुन्न । वातावरण र परिवेशको विश्लेशण नगरी, विश्वका अन्य देशको सन्दर्भ ल्याएर सुझाव मात्रै दिदैं जाने हो भने शिक्षकको कार्य सम्पादन दुविधामा फस्छ ।
अभिभावक र प्रधानाध्यापकका सुझाव
शिक्षक भनेको सबै शैक्षिक निकायको कमजोरी बोक्ने भरिया भएको छ । अझ प्रधानाध्यापकको कमजोरी लुकाउने अचुक अस्त्र भनेको शिक्षकको लाहपरवाहीले भन्ने वाक्यांश हो । जस आफ्नो र अपजस शिक्षकको भन्ने सिद्धान्तबाट बाहिर निस्कन कति प्रधानाध्यापक तया छन् ?
तर सामाजिक सञ्जालमा आए जति सबै सुझाव सुन्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन खोज्ने हो भने शिक्षक एउटा फुटवल बनेर कुहिरोको काग झै हराउँछ । आवश्यक सुझाव पढाँै र सुनाँै र असल व्यवहारिक रुपान्तरणमा लागौँ । एउटा फुटबलको रुपमा हैन सवल पेशाकर्मीको रुपमा स्थापित बनौँ । अन्य सम्वद्ध पक्षले आलोचना हैन शिक्षक बन्न सकारात्मक उर्जा प्रदान गरौँ ।
शिक्षकलाई शिक्षक नै बन्न दिउँ ।
पौडेल, भारती माध्यमिक विद्यालय पाख्रिवास धनकुटाका शिक्षक हुन् ।